Mampiasà, mivarotra ary mifampiresaka amin'ny Formstack Launch Pad | Martech Zone
Mampiasà, mivarotra, ary mifampiresaha amin'ny Pad Form Launch Formstack
Zoma 23 Novambra 2012 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Iray amin'ireo zavatra mahafinaritra momba ny maha masoivohom-barotra sy ny fihazakazahana Martech Zone dia ny mampiasa ny fitaovan'ny mpanjifantsika amin'ny tranokalanay manokana sy ny tranokalanay manokana. formstack efa mpinamana hatramin'ny nanombohany… raha ny marina talohan'ny nanombohany. Faly aho niara-niasa tamin'ny iray tamin'ireo mpanorina folo taona lasa izay ary tiako ny mahita azy mitsambikina avy any amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana sy ny fanombohana formstack.
Formstack izao dia nitombo mpampiasa maherin'ny 100,000! Ary tena faly izahay manana azy ireo ho mpanohana an'i Martech.
Misy mpanamboatra endrika hafa any, ary misy mpanamboatra endrika izay ananan'ny sehatra manokana. formstack dia nanamboatra ampahany lehibe amin'ny tsena satria mpivarotra sy agnostika platform tokoa izy ireo. Iray amin'ireo lakile kely tsy fantatra formstack Ny fahombiazany, na izany aza, dia nanao asa mahatalanjona izy ireo tamin'ny fananganana fidirana novokarina niaraka tamin'ny sehatra hafa. Mahagaga ny lisitra… ary ankehitriny formstack dia namoaka sehatra fanampiny antsoina hoe beta ny beta Mandrosoa Pad.
Ny Launch Pad vaovao an'ny Formstack dia sehatra iray mitambatra amin'ny endrika an-tserasera, pejin-tranonkala, fivarotana e-varotra, ary fitaovan'ny marketing amin'ny mailaka, namboarina mba hitondra ny orinasa kelinao any amin'ny ambaratonga manaraka. Izy io dia ivon'ny fampiharana an-tranonkala notsorina izay hanamora ny fampandehanana ny orinasanao. Ity misy tantaran'ny mpampiasa tsara izany formstack novolavolaina hanazavana ny Launch Pad:
Oliver dia manana fivarotana mitahiry vola any an-toerana ary nazoto izy formstack mpampiasa mitady hanitatra ny fisian'ny orinasany madinidinika. Araho ny tantaran'ny fampiasany formstack 'Launch Pad mba hitondra ny asany any amin'ny ambaratonga manaraka.
miisa - Nampiasa ny fitaovana Pejy i Oliver mba hamoronana haingana ny fisianà tranonkala afovoany ahafahan'ny mpitsidika miditra amin'ny fampahalalana momba ny orinasany sy rohy mankany amin'ny fivarotana virtoaly azy. Afaka nanamboatra ny pejiny i Oliver mba hifanaraka amin'ny loko sy ny fahatsapan'ny marika.
Sell - Avy amin'ny pejin'i Oliver, ny mpividy dia afaka mahazo ny vokatra natolony manontolo amin'ny alàlan'ny fitaovana Stores. Tamin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity dia nanangana pejy tsirairay i Oliver mba hamoahana ny vokatra tsirairay avy, ahafahan'ny mpampiasa mivezivezy ary mametraka baiko ao anaty fotoana fohy.
Miresaha - Taorian'ny fanangonana adiresy mailaka an'ny mpanjifa dia te hampahafantatra azy ireo momba ny varotra sy ny hetsika ho avy i Oliver. Nampiasa ny Launch Pad izy mba hamoronana fanentanana mailaka namboarina haingana izay nanasongadina ireo entana ireo, nandrisika ireo mpankafy azy hiverina hiverina any amin'ny magazay, ao amin'ny magazay na an-tserasera.
miaraka formstack 'Launch Pad, azonao atao ny manomboka (na manatsara) ny ezaka varotrao amin'ny sehatra iray afovoany. Tsotra ny fitantanana, mitaky fotoana kely hanombohana ary indrindra indrindra, mamela anao hiverina amin'ilay tianao hatao izy io. Manomboha andrana maimaimpoana amin'ny Launch Pad anio… ny famandrihana matihanina dia $ 29 isam-bolana fotsiny!
Tags: misintona datamanangona angonafisamborana dataformstackampidiro ny ecommercefandefasana pad
Fanaraha-maso sy famoahana haino aman-jery sosialy
Làlana mankany amin'ny fahombiazana amin'ny marketing amin'ny Internet